Clip 'Movie' cusub oo 'Wrong Turn' ayaa muujinaya Giant Log Mowing Down Hikers
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Clip 'Movie' cusub oo 'Wrong Turn' ayaa muujinaya Giant Log Mowing Down Hikers
Warar Naxdin LehMovies
Leexasho qaldan: Aasaaska sii daayay muuqaal-muuqaal-muuqaal ah usbuucii la soo dhaafay. Hada cinwaan looga dhigay Gadaal qaldan filinka waxaa jilay Matthew Modine, Charlotte Vega, iyo Bill Sage; waxaa loo qorsheeyay in lagu sii daayo tiyaatarada (iyo VOD aan xadidnayn) hal-habeen-keliya bisha Janaayo 26.
Muuqaalka waa IGN gaar ah oo wax yar ka iftiiminaysa jilayaasha da'da yar ee ku lumay kaynta oo ay ku raad joogaan koox fara badan oo dad cun ah. Abuuraha taxanaha ah Alan B. McElroy wuxuu qalinka ugu soo celiyay qalinjabintaan halka Mike P. Nelson (Reerka) jiheeyaa.
Qeybta hoose waxay dejineysaa sheekada muujineysa koox asxaab ah oo hoos u socda iyada oo loo marayo Wadada 'Appalachian Trail'. Meella'aan, geed weyn oo jirridda ah ayaa la siidaayaa oo wuxuu bilaabaa inuu gadaal u rogrogo sida hawo dhaqameedka qarniyadii hore. Markii ay dabinka ka carareen, hal nin oo dhallinyaro ah (Vardaan Arora) ayaa geed lagu taageeray iyada oo geedka ka baxsan xakamaynta uu u sii jeedo xaggiisa, taasoo soo jeedinaysa dhimashadiisa dhiigga.
Xaqiijinta, oo dib u bilaabatay 2003, waxay lahayd (illaa iyo hadda) shan taxane, mid walbana leh heerar kala duwan oo dhaleeceyn ah. Badanaa, taageerayaashu waxay daacad u yihiin asalka jilaya Eliza Dushku iyo Desmond Harrington. Resort Last wuxuu ahaa galitaankii ugu dambeeyay ee taxanaha gadaal sanadkii 2014. Dib u bilaabida filimku wuxuu bilaabmay bishii Sebtember 2019 waxyar uun kahor faafida.
Sida kuwa wax dila ay u socdaan, ayaa Gadaal qaldan faransiisnimadu waxay ku bilaabatay si xoog leh. In kasta oo fikradda laga soo amaahday sheekooyin kale, haddana taageerayaasha naxdinta leh ayaa la dhacay dilka iyo tayada wax soo saarka. Filimadii dambe, dad cunnida, mid kasta oo qaabkiisa u gaar ah u diley wuxuushnimo filim xusuus leh oo dheereeyey nolosha xorriyadda.
Ugu dambeyntii noqda wuxuu ku soo beegmayaa xilli taageerayaasha cabsida ay u ooman yihiin filim istiraatiijiyad leh ka dib markii ay ku raaxaysteen dilal badan oo filimo argagax leh oo madax-bannaan intii lagu karantiilay guriga. Guriga wax soo saarka Jarmalka ee Constantin Films ayaa la soo saaray Gadaal qaldan iyada oo Saban ay qaadatay xuquuqda qaybinta Waqooyiga Ameerika dabayaaqadii sanadkii hore.
Gadaal qaldan sii deyn doono hal habeen tiyaatarada, iyo VOD, Janaayo 26.
Gadaal qaldanBaadi qaldan: Dalxiiskii ugu dambeeyay
'Wrong Turn' Reboot Hal Habeen oo keliya Liisaska Tigidhada ayaa taagan
DIB U EEGID: Majaajillo Sawireed '' Ice Cream Man 'waa Fiendishly la jeclaan karo